सामाजिक सन्देश बोकेर पनि हेर्न रमाइला हुने १० बलिउड चलचित्रहरु - यस मध्ये कुन हेर्नु भयो ? - ज्ञानविज्ञान
सबै भन्दा पहिले बलिउड वा हिन्दी फिल्महरुको प्रचार भयो भन्ने नसोच्नुहोला । हामीलाई राम्रो प्रभाव पर्छन् भने जुन भाषाका वा देशमा बनेका भए पनि चलचित्र, पुस्तक र कला सम्मानजनक नै हुन्छ । त्यसो त भारत देशसँग हाम्रो सिमाना मात्रै जोडिएको छैन, हाम्रो सभ्यता र संस्कृति पनि जोडिएको छ भने समस्याहरु पनि जोडिएका छन् ।
भारतमा पनि हाम्रा जस्ता समस्या छन् र हामीमा पनि भारतका जस्ता समस्या छन् । यसैले उता पट्टी बनेका सामाजिक फिल्महरुले हाम्रो समाजमा पनि केहि सन्देश भने दिन्छ नै । यहि राम्रो सोचाइले हामीले यहाँ यो लेख तयार पार्न लाग्दैछौँ ।
सामान्यतया यो विश्वास गरिन्छ कि यदि कुनै सामाजिक सन्देश एक चलचित्रको माध्यमबाट सुनाईन्छ, यसको असर मानिसहरुमा गहिरो पर्न जान्छ । त्यसैले यहाँ एक चलचित्रहरूको सुची छ जुन केवल तपाइलाई मनोरंजन मात्र दिदैनन् कि सामाजिक संदेश पनि दिन्छन् ।
हामीले यहाँ १० वटा फिल्महरुको सूचि बनाएका छौँ । कृपया हेर्नुहोला र मन परे सेयर गर्नु होला । ताकि अरुले पनि जानकारी पाउन् ।
तारे जमीन पार
तारे जमीन पर (२००७) दर्शील स्याफरी, आमिर खान, टिस्का चोप्रा अभिनित भारतीय चलचित्रमा बनेको सबैभन्दा भावनात्मक रुपमा मिल्ने एक फिल्म हो । फिल्मले dyslexia र बच्चाको पालनपोषणको विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील र जानकारीपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्दछ । यो निर्देशकको रूपमा आमिर खानको पहिलो फिल्म पनि हो | यस फिल्मले पाच फिल्म फेयर अवार्ड जित्यो र यसमा भएका संगीतहरु पनि प्रसंसयोग्य पनि छन् ।
कमेडी ड्रामामा आधारित भएर भनेको यस फिल्मले तपाइलाई मनोरंजन मात्र हैन, आफ्नो जीवनको बारेमा एकपटक सोच्न बाध्य पनि बनाउछ । आमिर खान, करीना कपूर, शर्मन जोशी र आर माधवनको मुख्य भूमिका भएको यस फिल्मले शिक्षा क्षेत्रका बारेमा र किताबी ज्ञान मात्र हैन, बाहिरी कुराहरु पनि जान्न आवश्यक छ भनेर बुझाउँन खोजेको छ । यस फिल्मलाई हिन्दि सिनेमा क्षेत्रमा एक सफल फिल्मको रुपमा हेरिन्छ । यस फिल्मले ६ फिल्म फेयर अवार्ड जितेको छ ।
ओ माइ गड
परेश रावल र अक्षय कुमारको मुख्य भूमिका रहेको यस फिल्म २०१२ मा बनेको हो र यस फिल्मका डाइरेक्टर उमेस सुक्ला हुन् । एक भगवान भनेर कहिल्यै पनि विश्वास नगर्ने व्यक्तिको वारिपरि घुमेको यसको कथा एकदैम रोमान्चक छ । यस फिल्मले भगवान, धर्म, आस्था, नास्तिकका बारेमा एक सफल कथा बुनेको छ । मानवता र धर्मको फरकमा यसले निकै राम्रो प्रस्तुती देखाएको छ ।
२०१६ को बलिउड फिल्म दंगल महावीर सिंह फोगाट (आमिर खान) र उनकी छोरी गीता फोगाट (फातिमा सना शेख) र बबिता कुमारी (सान्या मल्होत्रा) को जीवनमा आधारित बायोपिक फिल्म हो । यस फिल्मले खेलकुदको बारेमा राम्रो शिक्षा दिएको छ यसका साथै बुवा र छोरीको सम्बन्धक बारेमा पनि राम्रो ब्याख्या गर्न सफल भएको छ । यस फिल्मले बोकेको अर्को राम्रो संदेश छोरा र छोरि बिचको विभेद पनि हो ।
स्वदेश २००४ मा बनेको एक उत्तम फिल्म हो । शाहरुख खान र गायत्री जोशी अभिनित यस फिल्मक डाइरेक्टर आशुतोष गोवारीकर हुन् । यस फिल्मले समाजमा हुने विभिन्न कुराहरुलाई उठ्ठान गरेको छ । जातीय विभेद, दाइजो प्रथा र शिक्षाको कमि जस्ता सामाजिक कुराहरुलाई बिशेष ठाउँ दिएको छ । बक्स अफिसमा असफल मानिए पनि यो फिल्म हिन्दी फिल्महरुमा निकै उत्कृष्ठ फिल्म मानिन्छ । शाहरुख खानले आफ्नो हेर्नै पर्ने फिल्महरुमा यो फिल्मलाई पनि लिने गर्छन् ।
२००७ मा बनेको चक दे इन्डिया भारतीय चलचित्र उद्योगमा निर्मित खेल बिषयको एक उत्तम चलचित्र हो । शाहरुख खानको प्रमुख भूमिका रहेको यस चलचित्रमा शाहरुख खानले एक हक्की कोचको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यस चलचित्रले समाजका धेरै पक्षहरुको अन्वेषण गर्ने कोसिस गरेको छ । जस्तै : लैंगिक भेदभाव, एकताको अभाव, जाति जस्ता धेरै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । चक दे इंडिया बलिउडको एक प्रशंसित फिल्म हो ।
अरुणाचलम मुरुगनाथमको जिन्दगीमाथी आधारित भएर निर्माण भएको फिल्म हो ‘प्याडम्यान’ । यो फिल्म २०१८ को सुरुवातमा नै रिलिज भएको थियो भने बक्स अफिसमा मात्रै होइन, समालोचकहरुमा पनि यसले प्रभुत्व जमाएको थियो । फिल्ममा अक्षय कुमार, राधिका आप्टे र सोनम कपूर मुख्य भूमिकामा छन् । राधिका, अक्षयकी श्रीमती बनेकी छिन् । फिल्ममा अक्षय स्यानेटरी प्याड बनाउने मेशिन बनाउँछन्, जसबाट सस्तो मूल्यमा गाउँका महिलाहरुले स्यानेटरी प्याड प्राप्त गर्न सक्छन् । ‘प्याडम्यान’ यूनाइटेड नेशनमा सुट गरिने दोस्रो फिल्म हो । यो फिल्मका निर्देशन आर बाल्की हुन् ।
ट्वाइलेट एक प्रेम कथा
ट्वाइलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंहद्वारा निर्देशित एक फिल्म हो । यो एक सामाजिक व्यंग्य फिल्म हो जसले ग्रामीण क्षेत्रमा सरसफाईको महत्त्व जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा प्रकाश दिन्छ । फिल्मको कथा प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदीको स्वच्छ भारत अभियानबाट प्रेरित छ । फिल्म ११ अगस्त २०१७ मा सिनेमा घरहरूमा रिलीज भएको थियो । फिल्ममा अक्षय कुमारको अभिनय रहेको छ । सामाजिक बिषयवस्तुमा अक्षय कुमारको सूचि यो फिल्मले उल्लेखनिय योगदान दिएको छ ।
नील बट्टे सन्नाटा, सन् २०१४ मा अश्विनी अय्यर तिवारीद्वारा निर्देशित कमेडी-ड्रामा फिल्म हो । फिल्ममा स्वरा भास्करले एकदमै राम्रो अभिनय देखाएकी छिन् । उनी उच्च माध्यमिक विद्यालय ड्रप-आउट घर दासीको भूमिका खेल्छिन् जसको नाम चन्दा सहाय थियो, जो अपेक्ष नामको सुन्दरी युवतीकी एकल आमा थिइन् । फिल्म सामाजिक व्यक्तित्वको बाबजुद सपना र उसको जीवन परिवर्तन गर्ने व्यक्तिको अधिकारको विषयमा आधारित छ । फिल्मले आलोचक र दर्शक दुबैबाट प्रशंसा पायो । आलोचकहरूले उत्पादनका अधिकांश पक्षहरू विशेष गरी यसको कथा र यथार्थवाद र कलाकारहरूको प्रदर्शन विशेष गरी भास्करको प्रशंसा गरे । फिल्मले भिन्न भिन्न बिधामा अवार्डहरु जित्यो भने फिल्मले बक्स अफिसमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्‍यो । उही वर्ष, फिल्म अम्मा कनककुको रूपमा तमिलमा पुनःनिर्माण गरियो, जुन अय्यरले निर्देशित गरे । अर्को वर्ष, यो मल्यालममा उर्धनम सुजाता नामले निर्माण गरिएको थियो ।
पीके राजकुमार हिरानी निर्देशित फिल्म हो । यो २०१४ मा रिलिज भएको थियो । यस फिल्मको निर्माण राजकुमार हिरानी र विधु विनोद चोपडा र सिद्धार्थ रोय कपूरले गरेका छन् । फिल्ममा आमिर खान, अनुष्का शर्मा, संजय दत्त, बोमन ईरानी र सुशांत सिंह राजपूत छन् । यो फिल्म भारतको सबैभन्दा सफल चलचित्र बन्यो । अरु ग्रहबाट आएको एलियन मार्फत यस फिल्ममा हाम्रो समाजमा भएको राम्रो नराम्रो कुराहरुबारे देखाइएको छ ।
तपाईलाई हाम्रो सूचि कस्तो लाग्यो ? यो बाहेक अरु धेरै फिल्महरु पनि छन् जसलाई हेर्दा हाम्रो सामाजिक विषयवस्तुबारे थप जानकारी प्राप्त हुन्छन् । त्यस्ता कुनै चलचित्र छन् भन्ने लाग्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला ।
त्यस्तै कुनै बिषयमा लेख लेखिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने त्यस्तो बिषयवस्तु पनि दिनुहोला । हामी त्यसबारे लेख्ने प्रयास गर्नेछौँ । थप जानकारीका लागि हाम्रो फेसबुक पेज ज्ञानविज्ञान लाइक गर्न नबिर्सनुहोला । धन्यवाद ।
Don't Miss it के तपाइलाइ खाेकीले सताएकाे छ ? यस्ता छन् खोकीको औषधिहरू, जान्रुहाेस्
Up Next छालालाई गोरो बनाउँन घरैमा के के उपाय अपनाउँन सकिन्छ ?